Accueil > Gazetin'ny nosy > Fitondrana foibe sy Lalao Ravalomanana: Nosamborin’ny pôlisim-pirenena ny mpiaro ny ben’ny tanàna
Fitondrana foibe sy Lalao Ravalomanana: Nosamborin’ny pôlisim-pirenena ny mpiaro ny ben’ny tanàna
Mbola antsojay ifaminganan’ny mpitondra fanjakana foibe na ny eny Mavoloha, sy ry Ravalomanana ihany ve ity nitranga omaly ity. Niditra an-tsehatra hisambotra ny pôlisin’ny fiadidiana ny tanànan’Antananarivo (Police municipale) sy ny mpiaro iray an-dRtoa Ben’ny Tanàna Rakotonirainy Lalao Ravalomanana mantsy ny avy amin’ny pôlisim-pirenena etsy amin’ny foibe etsy Tsaralalàna, omaly hariva.
Ilay mitondra môtô mialoha lalana an-dRtoa Ben’ny tanàna io.
Tsy nety nivoaka tao amin’ny lapan’ny tanàna etsy Analakely izy ireo. Tsy fantatra ny ho fitohizany aloha fa tamin’ny fotoana nanoratanay ity lahatsoratra ity dia mbola nifampiandry teny ny andaniny sy ny ankilany.
Arahintsika maso ny ho fivoarany, fa ny re dia hoe tsy eken’ny mpitandro ny filaminana ilay fisavana lalana ataon’ny môtô ho an-dramatoa Ben’ny tanàna, ary toe hoe «be famaliana ny mpitandro ny filaminana eo anivon’ny pôlisim-pirenena ireo mpiaro ny ben’ny tanàna Rakotonirainy Ravalomanana Lalao ».